Martin Luther King နှင့် Montgomery Story - သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် လေ့လာမှုလမ်းညွှန် (ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း) - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
ဇန်နဝါရီလ 15, 2022 CV 0
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - Reconciliation USA ပညာသင်ဆု)
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် လေ့လာမှုလမ်းညွှန်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Rev. Martin Luther King, Jr. ၏ အသက်နှင့် အမွေအနှစ်ကို ဂုဏ်ပြုရန် သင်ပြင်ဆင်နေချိန် နှင့် မကြာမီ Black History Month ကို ဂုဏ်ပြုရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် Fellowship of Reconciliation သည် အသစ်ထုတ်ဝေခြင်းကို ကြေညာရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ အခမဲ့၊ အွန်လိုင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် လေ့လာမှုလမ်းညွှန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျော်ကြားသော 1957 ရုပ်ပြစာအုပ်၊ Martin Luther King နှင့် Montgomery Story တို့နှင့်အတူ လိုက်ပါရန်။
FOR's Alfred Hassler မှ ဖန်တီးထုတ်ဝေခဲ့သော သမိုင်းဝင် ရုပ်ပြစာအုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် FOR's Alfred Hassler မှ ဖန်တီးထုတ်ဝေခဲ့သော သမိုင်းဝင် ရုပ်ပြစာအုပ်ကို FOR မှ တီထွင်ထားသည့် ဤအသစ်စက်စက်၊ ကျယ်ပြန့်သော လမ်းညွှန်ချက်သည် အသစ်စက်စက်၊ ကျယ်ပြန့်သော လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖန်တီးထားပါသည်။ Montgomery Bus Boycott နိဂုံးချုပ်ပြီး တစ်နှစ်မပြည့်သေးသော Rev. Dr. King နှင့်
လမ်းညွှန်တွင် ပါဝင်သော နောက်ခံစာဖတ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းမေးခွန်းများ၊ K-12 စာသင်ခန်း သင်ခန်းစာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ထပ်လောင်းဖတ်ရှုခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ။ လှုပ်ရှားမှုများတွင် Bayard Rustin ၏လျှို့ဝှက်စာပေးစာနှင့် SNCC မဲဆန္ဒရှင်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကဲ့သို့သော သမိုင်းဝင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ သပိတ်မှောက်မှုများ၊ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုနှင့် ကွယ်လွန်သူ Hon. “Good Trouble” လို့ ခေါ်တဲ့ John Lewis
၎င်းတို့အားလုံးသည် ရုပ်ပြစာအုပ်၏ စာသားကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း၊ ရှုပ်ထွေးစေရန်နှင့် ဖြည့်စွက်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး Montgomery Bus Boycott၊ 1950s နှင့် 60s အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပြည်သူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများကြား ဆက်စပ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြကာ မေးခွန်းများမေးရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် အမျိုးမျိုးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရုန်းကန်မှုများ—အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်—။
ဤလက်လှမ်းမီနိုင်သော PDF သင်ခန်းစာများနှင့် သင်ကြားရေးကိရိယာများကို သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဤအရင်းအမြစ်ကို သင့်ကျောင်း၊ အသင်းတော်၊ လူမှုကွန်ရက်များနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှဝေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
“ ကံကြမ္မာတစ်ခုတည်းသောအဝတ်အစားဖြင့်ချည်ထား” - Covid-19 ကူးစက်ရောဂါအပေါ်လူမျိုးစုဗဟိုပြုနှင့်ကမ္ဘာ့ဗဟိုပြုအမြင်များ
မေလ 1, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ပြaleနာကိုထိရောက်စွာနှင့်လူသားဆန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်နားလည်မှုနည်းလမ်းများကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအသွင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဟု Dale Snauwaert ကပြောကြားသည်။ လူမျိုးစုဗဟိုပြုမှကမ္ဘာ့ဗဟိုပြုရှုထောင့်သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အရေးကြီးသောအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဗျူရို၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်အတွက်ပရောဖက်ပြုသောအသံ - ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ Kပြီလ ၄ ရက်တွင် MLK Jr's ကိုဂုဏ်ပြုသော“ ဗီယက်နမ်အပြင်၊
ဧပြီလ 4, 2017 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀၊ 4ပြီ ၄ ရက်၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာသည်ဆယ်စုနှစ်များတစ်လျှောက်မြည်တမ်းစကားပြောခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပရောဖက်ပြုထားသောကိုယ်ကျင့်တရား၊ အသိပညာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရဲရင့်ခြင်း၏အထင်ရှားဆုံးဖော်ပြချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဒိုချိုင်းနားတွင်သမ္မတဂျွန်ဆင်၏အကြီးအကျယ်စစ်ပွဲကိုရှုတ်ချခြင်း၏နိုင်ငံရေးအရနောက်ကွယ်မှကြောက်ရွံ့သောအမေရိကန်လူထုအခြေပြုလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလက်တွေ့ကျသောဝေဖန်ရေးသမားများနှင့်ဘုရင်သည်သူ၏မိန့်ခွန်းတွင်ရာထူးတိုးခဲ့သည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, စစ်ရေးနှင့်အစွန်းရောက်ရုပ်ဝါဒ။ ရှေးပရောဖက်များ၏ဉာဏ်ပညာကဲ့သို့ပင်ဘုရင့်မိန့်တော်မူချက်များနှင့်“ တန်ဖိုးထားမှုတော်လှန်ရေး” ကိုတောင်းဆိုရန်မှာလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ငါးခုကကဲ့သို့ပင်ယနေ့ထက်မြက်မြဲတက်ကြွဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
တော်လှန်ရေးအဖြစ်ကျောင်းများသို့မဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုပညာရေးမှာ Grizzlies ဆန့်ကျင်သေနတ်များ?
ဇန်နဝါရီလ 23, 2017 သတင်းနှင့်အထူးများ, သဘော 1
ပက်ထရစ်ဟီလာကလာမည့်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတုန့် ပြန်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးသည်လူတို့အားတရားမမျှတမှုကိုတွန်းလှန်ရန်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပိုမိုထိရောက်စွာပါ ၀ င်ရန်လေ့ကျင့်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]